ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू भाग १—ख्रीष्टियान जीवन कसरी जिउने । निःशुल्क ख्रीष्टियान पुस्तक | रेमा साहित्य वितरकहरू
ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू—भाग एक
समूह एक, पहिलो पुस्तक, ४६ पृष्ठहरू ।
वाचमेन नी र विटनेस लीले ख्रीष्टियान जीवन र कसरी तपाईंले यसलाई व्यवहारिक रूपमा जिउन सक्नुहुन्छ भनी पेश गर्दछ । अध्याय एक तपाईंको मानव जीवनको अर्थसित शुरू हुन्छ र तपाईंले आफ्नो दैनिक जीवनमा लागू गर्न सक्ने व्यवहारिक बुँदाहरूसित जारी रहन्छ । यो पुस्तकले प्रचुर र अर्थपूर्ण ख्रीष्टियान जीवनको निम्ति पक्का जग प्रदान गर्दछ ।
तपाईंको मानव जीवनको अर्थ पत्ता लगाउनुहोस् ।
तपाईंको मुक्तिको निश्चयता र सुरक्षालाई अनुभव गर्नुहोस्—कहिल्यै तपाईंको मुक्तिलाई पुनः शंका नगर्नुहोस् !
शैतानबाटका दोषमय अनुभूतिहरू र दोषारोपणहरूद्वारा बमबारी गरिनुभएको छ ? ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतको विजयी शक्ति महसुस गर्नुहोस् !
ख्रीष्टिलाई सम्पर्क गर्ने र उहाँको उपस्थितिमा रहने ज्यादै सरल तरीका सिक्नुहोस्
“ख्रीष्टियान जीवन विशेषता र अर्थले भरिपूर्ण छ, तैपनि धेरै मानिसहरूले परमेश्वरको वचन, बाइबलमा प्रस्तुत गरिएझैं यस जीवनका आधारभूत तत्वहरूलाई बुझ्दैनन् । वाचमेन नी र विटनेस लीद्वाराका ख्रीष्टियान जीवनका आधारभूत तत्वहरू, भाग एकमा, ख्रीष्टियान जीवनलाई प्रस्तुत गरिएको र व्याख्या गरिएको छ । मुक्तिको परमश्वरको योजना मानव जीवनको रहस्यबारेको अध्याय एकमा प्रस्तुत गरिएको छ । त्यसपछिका अध्यायहरूले कुनै ख्रीष्टियानको निम्ति धेरै आधारभूत अनुभवहरूको विस्तृत विवरण दिन्छन् । अन्तिम अध्यायले कुनै विश्वासीको ख्रीष्टियान जीवनको लागि आखिरी चाबी—मानव आत्मामा हुने ख्रीष्टको अनुभव—प्रस्तुत गर्दछ । परमेश्वरलाई खोजी गर्नेहरूका निम्ति र ख्रीष्टमा बढ्न चाहना गर्ने विश्वासीहरूका निम्ति, यी सन्देशहरूले प्रचुर र अर्थपूर्ण ख्रीष्टियान जीवनको लागि जग बसाल्नेछन् ।”
मानव जीवनको रहस्यः के तपाईंले तपाईंको मानव जीवनको अर्थ के हो अथवा किन तपाईं यहाँ यस पृथ्वीमा हुनुहुन्छ भनी कहिल्यै अचम्ममा पर्नुभएका छ ? कसरी तपाईंलाई परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न खास रूपमा र पूर्ण रूपमा सृष्टि गरियो भनी थाहा पाउनुहोस्, र कसरी ख्रीष्ट तपाईंको मुक्तिको निम्ति मार्ग बनाउन पृथ्वीमा आउनुभयो भनी हेर्नुहोस् ।
मुक्तिको निश्चयता, सुरक्षा, र हर्षः ठोस जगझैं मुक्तिको निश्चयता ख्रीष्टियान जीवनमा बढ्नलाई पूर्ण रूपमा आवश्यक हुन्छ । यो अध्यायमा, तपाईंलाई तपाईंको मुक्तिको निश्चयता पक्का गर्ने ३ बुँदाहरू, ख्रीष्टको मुक्तिको अनन्त स्वभाव प्रमाणित गर्ने ८ थोकहरू, र तपाईंको प्रचुर मुक्तिको रुचाइलाई कायम राख्ने ४ तरीकाहरू दिइएका छन् ।
ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतः कुनै ख्रीष्टियानको निम्ति कुनै पनि क्षणमा परमेश्वरकहाँ अघि आउन सम्भव छ भनी के तपार्ईंले जान्नुभयो ? यो केवल ख्रीष्टको बहुमूल्य रगतको शक्तिद्वारा मात्र हुन्छ । जुन बेला कुनै पाप, शत्रुबाटको कुनै दोषारोपण, कुनै दोष भित्र आउँदछ, तपाईंले तत्कालै स्वीकार गर्नुभएर प्रभुको विजयी रगत दाबी गर्न सक्नुहुन्छ । यो स्वीकारमार्फत, तपाईं र परमेश्वरबीचको सङ्गति तत्कालै पुनस्थापित हुन्छ ! असजिलो महसुस गर्दै, तपाईंका विगतका असफताहरूमा टाँसिदै, वा परमेश्वरबाट अलग पारिदै अझ बढी कुनै समय खेर नफाल्नुहोस् । ख्रीष्टको सदा–उपलब्ध रगत लागू गर्नलाई थाहा पाउनुहोस् । क्षण–क्षण र दिनदिनै ख्रीष्टको सदा–उपलब्ध रगतलाई लागू गर्न र शैतानबाटको हरेक दोषारोपण विजयी गर्न यसको शक्तिलाई अनुभव गर्नलाई सिक्नुहोस् ।
प्रभुको नाउँको पुकाराः यो अध्यायमा, हामी पुरानो र नयाँ करारका विश्वासीहरूले प्रभुको नाउँको पुकारा गराइमार्फतको विस्तृत इतिहास देख्न सक्छौं । योचाहिँ शुरूका नयाँ करारका ख्रीष्टियान अभ्यास र कुनै ख्रीष्टियानको मुख्य अभिज्ञाता थियो । यो अध्यायमा, तपाईंले प्रभुको नाउँको पुकाराका फाइदाहरूलाई महसुस गर्नुहुनेछ ।
ख्रीष्टलाई अनुभव गर्ने चाबीः बाइबलसित “उहाँमा हिँड्नुहोस्” (कल. २:६), “मेरो लागि, जिउनुचाहिँ ख्रीष्ट नै हो” (फिलि. १:२१) र “हाम्रो जीवन ख्रीष्ट” (कल. ३:४) भन्ने वाक्यांशहरू छन् । यसको अर्थ के हो ? प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्राप्त गरिसकेपछि, कसरी तपार्इंले व्यवहारिक रूपमा ख्रीष्टलाई तपाईंको जीवनझैं लिन र उहाँमा हिँड्न सक्नुहुन्छ ? चाहे तपार्इं दालचामलको भण्डारणमा गइरहनुभएको, कक्षामा बसिरहनुभएको वा तपाईंको दाँत माझिरहनुभएको नै होस्, प्रभुलाई सम्पर्क गर्न सम्भव छ । यो अध्यायले तपार्इंको सामान्य, दैनिक जीवनको माझमा ख्रीष्टलाई अनुभव गर्ने मार्ग खुल्ला पार्दछ ।